इच्छावृत्ति: 09/01/2010 - 10/01/2010
तिमी ( 20 गस्त 2009 को भाषा मान्यता दिवसमा पठन गरिएको कविता)
आज तिमी जन्मिएकीदेखि
बाँचेर आएका यतिका दिनसम्म
न ढुक्कले बस्न सकेकी छौ
न कि बस्न दिएकी छौ हामीलाई।
संविधानमा अन्तर्भुक्त हुँदी
हाम्रो हिताधिकारको कानून बनेँ झैँ
तिम्रो अस्तित्त्व, मर्यादाले
हामी जस्तै मान्छेहरूले पनि
तिमी हुनुको कदर गरेको थियो।
त्यस समय तिमी
यौनावस्थामा फूलेकी गुलाब झैँ
प्रेमी प्रेमिकाको प्रतिक बनेर
सुगन्ध र महिमा फिँजाउँदै हिँडिदियौ
विदेशीको उपमाले ऱङ्गिएका हामीहरको तिमी
एउटा आधार थियौ
जन्म जन्मान्तरसम्मको तागत थियौ
तर अहिले तिम्रो जन्मचिन्हमा
प्रश्न चिन्ह तेर्सिएको छ
ढुङ्गा-मुढाको झटारो हानिँदैछ
तिमी के गर्न सक्छ्यौ अबला भएर
ढुङ्गा-मुढा गर्ने तिमीलाई
आमरा बङ्गाली होइन
न कुनै वामपन्थी।
तिमीलाई परिचय दिलाउनेहरूका
बाबुले रोपेको खेतबारीमा
न राप्नै सक्दैनौ कि केही
या त रोप्नै पो चाहँदैनौ कि केही।
हैसियत, तागत भन्ने थोक नभएर होइन
हामी परम्परा विरोधी छौँ
परम्परित जीवन बँचाईमा
हिँडनै सक्दैनौ हामी
बाँच्नै जान्दैनौ हामी
हामी कम्प्युटर शताब्दीको मान्छे
हामीहरूको आफ्नै सिद्धान्त छ
र छ एड्भान्सको लेप।
तिमी मान्छौ कि मान्दैनौ
तर तिमीलाई फ्याँक्दै छ आज
खुट्टा भाँचि दिँदैछ
सत्यता र शुद्धताको
घुम्टो अढेर नहिँडे पनि भो तिमी
अशुद्धता र अस्पष्टको
त्यसैले तिम्रो बैशाखी बन्न आएका
तिमीलाई बोकेर हिँड्न लाज मान्छन् कि।
Posted by Dipen Tamang at Monday, September 27, 2010 No comments:
.. हरू !
गाडे घाउ भएर भिजेका
आदर्शतालाई रङ्गहीन बनाएको छ।
कुप्रो मान्छेहरूका शहर-बस्तीमा
परालको आगो जस्तै
साइली र माइली-हरू
रङ्गहीन झण्डा गाड्न
देश चलाउने धुनमा
परिबन्धको डोरीमा बाँधिएर
लाम् लागिरहेका छन्।
कञ्चनजङघामा उदाएको सूर्यले
साइला र माइला-हरू
रोडा-ढुङ्गा जस्तै भएका छन्।
भूसस्याहा कुकुर जस्तै
फनफनी चेप चहारीमा छन्।
ब्लुतुथको अदृश्य सङ्केतमा
एम एम एसको
अझ मौलाउँदै गईरहेका छन् ।
Posted by Dipen Tamang at Friday, September 24, 2010 No comments:
चेतनाले कुन्नि कतातिर
विद्रोह सचेत मानसिकताहरूको
विद्रोह अर्धसचेत झोपडीहरूको
..गर्नु पर्ने रहर।
बहाल शान्तिको नाममा उडेर
विद्रोहकै घरभित्र पस्छ।
चर्किएको कान तर पनि
विद्रोह गर्नै मन पराउँछ।
विद्रोह गालाभरि लाली दलेर मस्किन्छ सडकतिर
लक्ष्यको पगरी लाएर विद्रोह
आफ्नै घरभित्र अपरिचित बन्छ।
विद्रोहको खुल्ला खेस्रा-पत्र फ्याँक्छ
अखबारले विद्रोहकै बेढोँ थाम्छ
ओख्लीले मुस्लीको दुखाई थामेको जस्तो।
तर विद्रोह गाउँका झोपडीहरूले
पाइखाना पुछेर फालिदिन्छन्
किनभने फेरि विद्रोह
भोलिको लागि अर्कै आउँछ
Posted by Dipen Tamang at Thursday, September 23, 2010 No comments:
फेरि दार्जिलिङकै कुरा
हिजदेखि दल परिवर्तन गर्ने खेल खेल्न थालेका छन् सबै दलका खेलाडीहरू। एउटा अर्को दलमा ,अर्को फेरि अर्को दलामा। आफ्नो दलका झण्डा दिएर जण्डाहरूले अझै जण्डाहरूलाई खदार्पण गरिरहेको छ। अनि स्वागत गर्ने दलकै माहीर राजनेताहरूले दल परिवर्तन गरेर घर पस्ने बाटो खोलेका हुन् भनेर भाषण पनि छाँट्दैछन्। अर्को दलकाहरूलाई आफ्नो दलमा समावेश गर्न पाउँदा खुशीले उचालिनु अनि आफ्ना दलका विपक्षी दलमा सामेल हुन जाँदा विपक्षीको ढयाङ्ग्रो बजाउन खोज्नु नै मात्र जानेका रहेछन् हाम्रा अगुवाहरूले भन्ने प्रतित हुँदछ। आफ्ना दलका सचेत र चँखोहरू अर्को दलमा थोप्रेको समाचारले दलका श्रेष्ठ कहलाइएकाहरू अहिले सम्म विपक्षी दलहरूले के गर्‍यो भनी खाल्डो खोल्न जुरिहाल्छ। दार्जिलिङलाई त राजनीति नफापेको हो भन्नु कि पाएर राजनीति गर्न नजानेको भन्नु। अचम्मै छ राजनीति दार्जिलिङको। राजनीतिको परिभाषासम्म नजानेकाहरूले हैकमवादको आधारमा राजनीति सफल भएको ठान्छ। फेरि हैकमवाद घरका बाबुले परिवारभित्र चलाएको जस्तो मात्र छ। घरदेखि बाहिर गएर त्यो हैकमवादको ढवाङ पिट्न त मरिहत्ते सक्ने होइन। अनि घरमा हैकमवाद चलाएर जहान-परिवारलाई मात्र तर्साएर के नै पो सप्रिन्छ र। आफ्नो सत्तामा सबै क्षमता आयो भने झन के हुने हो। अरूले त ज्यु ज्यु गर्नु बाहेक के रहन्छ र विकल्प। गोरामुमोले के गर्‍यो त्यो आज सोधी हिँड्ने प्रश्नै होइन। आफूहरूले के गर्छौँ त्यसको उत्तर दिने हो समय तर भाषणमा मात्र होइन। भाषण त जो कसैले जसरी पनि गर्न सक्छ। तर भाषणकै आडमा राजनीति गरेर हुँदैन। कर्मले, व्यवहारले राजनीति गरेको हुनपर्छ। गोरामुमोले 15 हजार एडहक नियुक्ति गर्‍यो। अहिले उनीहरू मात्र सबैभन्दा तल्लो दर्जाको गरीब जस्तो ठान्दै छन्। तर जो कोही साँच्चै गरीव र बेरोजगार छ उसको समस्याको समाधानतिर पहल कसले गरेको छ। डर छ ती एडहकहरूलाई यदि प्राधिकरण हुनअघि उनीहरूलाई स्थायी नियुक्ति गरिएन भने पछि पश्चिम बंगाल शिक्षा विभागले उनीहरूलाई नियम बमोजिम नभएको कारण बर्खास्त गर्ने छ भनेर। त्यस्तै गोजमुमोले जन्माएको छ जीएलपी। अब उनीहरू पनि स्थायीको नारा लगाएर सडक भर्ने छैन भन्ने कुनै ग्यारण्टी छैन। यी दुई कुरा दुवै पार्टीका एकनास छन्। तर शिक्षित बेरोजगार दुवै दलका कुनै सीमा रेखाले भेट्ने होइन। फेरि प्राधिकरणमा शिक्षा व्यवस्था गोजमुमोको अधिनस्थ हुने कुरा भएको छ। फेरि त्यही गोरामुमोको पालामा जस्तो काखी च्यापाई। पिल्सिने त उहीहरू हुन्छ जो पार्टीको झण्डा बोकेर नेतालाई जिन्दवाद भनेको छैन। बाटोमा तेर्सिएर शीर निहुर्‍याएको छैन। मात्र आफ्नो जाम्मिसकेको सर्टिफिकेट च्यापेर ओछ्यानमा रातभरि टीठलाग्दो सपना देख्छ।
Posted by Dipen Tamang at Monday, September 20, 2010 No comments:
आजको राजनीतिको कुरा
भारतीय राजनीतिका होनहार राजनितिज्ञहरूको आकस्मिक दार्जिलिङ आगमन र उनीहरूको दार्जिलिङ प्रतिको फोस्रा सहानुभूतिका दुई शब्दमा हाम्रा दार्जिलिङ्गे अनेताहरूको शीर निहुर्‌‍याईमा जनता पनि नेताकै टोपी हेरेर नतमस्तक बन्न बाहेक के नै पो गर्न जानेको छ र..जनताले नेता बनाउँछ भन्ने पूर्वधारणा अहिले समाप्त भएको छ। अहिले त नेताले जनता बनाउँछ भन्ने राजनीतिको ढयाङ्ग्रो पिट्न थालेको छ अनेताहरूले। हाम्राहरूबिचको राजनेता भन्नेहरू आफै आफमा लम्की थाप्ने खेलमा निकै माही भईसेकेका छन्। अनि भाषणमा गणतन्त्रको हननको कुरा बाहेक गर्न के पनि जानेका छैनन्। अनि परबाट आउने खुँखार राजनेताहरूको झूठो आस्वासनमा आशावादी हुन बाहेक केही विकल्प पनि देख्दैनन्। अखबारमा छापिएका घतलाग्दा शीर्षकले जनताको मनमा ठुलो आशा फेरि भरिदिन्छ तर आजकै दिनको लागि मात्र। भोलि त्यो खबर झूठा साबित हुन्छ। घोर निन्दा हुन्छ ।अनि हुन्छ फेरि आन्दोलनको अर्को जनताले सोँच्दै नसोँचेको , मनमा पच्दै नपचेका कुराको बँठ्याई। तब फेरि प्रश्नको बाडी चल्छ त्यै बुझेर अबुझ बन्ने जनताको मनमा फेरि के हुन्छ र नेता भनेको र राजनीति भनेको यस्तै होला। त्यो हाम्रो लागि हुँदै होइन। अझ अर्को कुरा त हाम्रा राजनीतिका समष्टि अनतर्गत रहेका फुचाफुचि धुपाउरेहरूले भन्दैछन गोर्खालीग या माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल हुनेहरू गोजमुमो पार्टीको होइन। एकदम सत्य नै हो त्यो। एउटा मान्छे कतिवटा पार्टीको सदस्य हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले आफूलाई जुन पार्टीमा सामाल हुने इच्छा गरे पाउनु पर्ने हो। किनभने त्यै धुपाउरेहरूले फेरि भाषणमा कुरा हाँक्छ जनताले स्वतन्त्र अधिकार पाउन पर्छ भनेर। तीहरूले एकपट्टिबाट हक र अधिकारको कुरा गरेर जनतालाई भिख माग्छन् अनि अर्कोपट्टिबाट त्यै जनतालाई तर्साउँछन्। के भन्ने तब। आज प्रश्नै प्रश्नै तेर्सिएका छन् जनताको सामु।
Posted by Dipen Tamang at Tuesday, September 14, 2010 No comments:
भाषा अनि हामी ( 20 अगस्त 2010 - भाषा मान्यता दिवसमा पठन गरिएको कविता)
साहित्यिक कोठेबारीमा...फोस्रा शब्दहरूमा।
त्यो बुँइ चढे्र आउन खोज्दैछ
भर्खर जन्मिएको अबोध शिशुको मस्तिष्कभरी
तर एड्भान्सको लेप लाएर
फेसनको रङ्गमञ्चमा उत्रेका हामी
काउकुती मानेर थेचार्दैछौँ त्यसलाई।
शब्दले मुख फड्काल्न थालेकोदेखि हामी
शब्दमै हुर्कियौँ, बड्यौँ र हिँड्यौँ
अब हामी स्वको धुरीमा घोडा चढेका छौँ
र जन्मबोधको ऋण फर्काउँदैछौँ यसरी
खै ! म त केही पनि जान्दिनँ।
आर् यू नेपाली ?
कम्प्युटरको च्याट स्क्रीनमा
शब्दहरू विदेशी झल्किँदैछ
या आइ एम नेपाली
तर भन्दैछ यता हामी विदेशी।
यहाँ हेर्नु होस् त शब्दको अर्थ
आइ एम अल्सो नेपालीको भेल बग्दैछ
बट् आइ कान्ट् राइट एण्ड स्पीक इन् नेपालीको समुद्रमा।
मम्मी, ड्याडीको शब्द घोकाउनलाई
फकाउँदै स्तन चुसाउँछे
हातमा भविष्यको वेस्वादिलो मिठाई पाएर
उफ्री उफ्री फलाक्छ त्यो दुधे बालक।
युवा भन्नु कि युवती भन्नु
भाषाको सभ्यताले त होला
हाफप्यानट् भन्नु कि मिनि हाफप्यान्ट् भन्नु
सुसंस्कृतको नारा लगाउँदै छ त।
साइनबोर्डमा अनुवादित जस्ताको तस्तै शब्दहरू
दोकान अनि होटलको ढोकामाथि उभिएर
वान्ता गर्नलाई घोप्टो परिरहेका छन्।
आज फेरि त्यो
अस्तित्वको मुखेञ्जीमा बरफ झैँ जाम्मिँदैछ
तर पनि जुलुस थर्काउँदैछ अस्तित्वको
कसको हो यो अस्तित्व ?
स्व को हो हँ ?
एक्लो म ? प्रतिनिधित्व गर्ने जाति ? फेरि भाषा ?
झाँक्रीहरू त सर्टिफिकेट बोकेर घुमन्ते भईरहेका छन्
एक गिलास फिक्का चियामा
कसरी जोखाना खुट्याउन मान्थ्यो र !
कथा सुनाऊँ ?
त्यो आदिम युगको
जहाँ, जोहरू बिनाभाषा सभ्य थियो कि !
तर फरक यति छ भनौँ
उनीहरू सोँच्दथे भाषापछिको जीवन कस्तो होला
हामी सोँच्दछौँ बिनाभाषाको संसार कस्तो होला।
भाषाको रथ यात्रामा गुढेर
आदिम मान्छे हामीकहाँ आइपुग्दा
फेरि विस्तारै भाषा मर्दै जान्छ
हामी आदिम युगको
त्यो नाङ्गो मान्छे बन्दै जान्छौँ।
Posted by Dipen Tamang at Sunday, September 12, 2010 1 comment:
बलात्कृत दुई पात एक सुइरो
तुर्लुङ्ग झुण्डिएको विश्व बजारमा
दुई पात एक सुइरो
सिमसिम पानीको स्पर्शमा झुम्दै
कठ्याङ्ग्रिने जाडो र
सूर्यको रापिलो स्पर्शभित्र गुट्मुटिएर
जीवन धान्नेको अभीष्ट बनेको छ।
सिरिरि हावामा छमछम् नाच्दै
लुकामारी खेल्छन् बादलका टुक्रासित
ठूली यस्तै रहेछ
अङ्ग-प्रत्यङ्ग दुई पात..तीन पात..ले
भन्दिनन् कसैलाई अधिव्याधि
यौनावस्थामा यस्तो हुँदोरहेछ।
चट्टै भागी पोइल जाने इच्छाहरू
हातेमालो गर्ने आकांक्षाहरू
दुई पात एक सुइरो जन्माउने अभिलाषाहरू
बट्टारिएका हत्केलाले आकस्मिक
रगतको ह्वात ह्वात आहाल बग्छ।
उत्सर्जित रगत-पसिनाको दुर्गन्धमा
चट्ट जिब्रो पड्काउँदै
विश्व बजारमा बलात्कार गर्न खोज्छ।
समुद्रपारि देखेका सपना
हुर्कँदै गएको इच्छाहरू छताछुल्ल हुन्छ
यौनाङ्गमा लट्टिएका प्रियसीहरू
सोतो हराएको बालक जस्तो हुन्छ।
मनभित्रका ज्वारभाटाहरू एक्कासि
हिंस्रक, आक्रोस, भयावह भई आउँछ।
थोत्रे नीतिलाई पदच्यूत गर्न
खल्बलिन्छ, सल्बलिन्छ मन
तर खै !
आजीवन आफ्नै मुटुका टुक्रा
दुई पात एक सुइरो-हरू
तुर्लुङ्ग झुण्डिएको हुन्छ विशव बजारमा।
लुटिएर बलात्कृत भएपछिको
पहिचान दिलाउन नसकेर
अनुहारमा बिषाक्त रेखा कोरिएको छ
सुन्दरताको मूल्य हराएको छ।
उकुसमुकुसिएर निस्सासिएको छ
जब आकाशै आफ्नो ठान्ने
वनमाराले सारा संसारलाई
अस्पष्टभित्र धमिल्याएको छ।
दुई छाक खुवाउन असमर्थ हुँदा
अभीष्टहरूको भविष्य निराकार भएको देख्दा
ओइलाई ओइलाई त्यसै जानु छ
Posted by Dipen Tamang at Sunday, September 12, 2010 No comments:
समयको हत्या गरेर
सेकेण्डलाई छयाप्पै पक्रेर
प्राणीकोमा होइन ?
आफूतिर बोलाउँछन् नि
एक लाख रूपियाँको इनाम छ।
बाह्र वर्षपछिको जुनी काट्ने मान्छे
सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन रे
जिउँदै ह्वासह्वासती गन्हाउने
जस्तै काखीको पसिना।
जिउने क्रममा जीवनलाई
सबथोक रुपियाँ ?
कि दुर्घटना मृत जिउलाई ?
लम्पसार तेर्सिएका मृतकमा
विवेकहीन ? कमिला
मेहनतको फल पाउँदैछ
जीवन धान्नेको अभीष्ट
हजार लाख इनाम
बित्थ्याको जिन्दगीको ?
दिदी-बहिनी नाइटो श्रृङ्गार
दाजु-भाई नाङ्गोलाई अझै नङ्ग्याउने
नौ महिनाको कोख फिस्
यस्तै हो इनाम ?
निराकार चित्र मृतकका
निश्चित छ ?
पैसाको बोक्रामै बेहोरिएको हुन्छ जीवन
लेऊ भएर आशामा।
Posted by Dipen Tamang at Wednesday, September 08, 2010 No comments:
मार्केटको सपिङ् कमप्लेक्समा
एक अर्ध युवक
च्याटिङ्मा बनेको गर्लफ्रेण्ड
देखिने नितम्ब वस्त्र
जस्तै 'नागाको पात'
हिप् पप् भन्दै
चालिस् इञ्चको "जिन्स् पाइजामा"
किनि रहेका छन्।
म्युजिक वर्ल्ड / सी डी कमप्लेक्समा
लहर लहर मिलाएर
देशगान गाउने धुनमा
म्युजिक भिडियो र एम पी थ्री-लाई
कोठाको टेबलमा राखेर
ढुङढुङ ढयाङ्ग्रो बजाउँदै छन्।
साङ्लीमा ताल्चा झुण्ड्याएर
जेल फोर्न तम्सिरहेका छन्।
साइबर क्याफेको जङ्गलमा
कहिले आउने र भेट्ने धुनसँगै
ढयाप्पै छेकाबन्दी लाएर
हिप् पप् सपना देख्दै छन्।
Posted by Dipen Tamang at Tuesday, September 07, 2010 No comments:
घर झर्ने बाटो बिर्सिएर
काँचुली युनिफारमको फेर्न नभ्याई
एकापट्टि छरपस्टिएका पन्ना
अर्को पट्टि जाम्मिएका शब्दहरूसँग।
एक दृष्टि परिवेश
शान्तिको लामो साससितै
डेस्कटपका बन्द आँखाहरू।
मनसितै हातका सिन्की औँलाहरू।
माऊसका तिखा नङ्ग्राले
हाई फाइभ, पिङ्क र
डब्लु डब्लु डब्लु डट्
सेक्स् डट् कमका
मनका जाम्मिएका शब्द-वाक्यहरू
फड्काई र हिँडाईमा
चोर बाटो लागि दिन्छन्।
साइबर क्याफेको बन्द कोठेबारीमा
मिनिमाइज् र म्याकसिमाइज्-सितै !
दशैं यस्तै हो..
जिन्दगीसँग अडेस् लागेका शीतको थोपा।
दुःख, दर्द, पीडादिको च्यूतपछिको
खुशी, आनन्द, हर्षोल्लास हो दशैं।
भारी हो दशैं।
क्षणिक हाँसो र शुभकामनाको
गुजुल्ट्याँई हो दशैं।
क्रन्दन र भयावहभित्रको
दशा हो दशैं।
किराले करयाक करयाक
टाउको दुखाई हो दशैं।
आउँ र ह्याङ ओभरको
ऐना हो दशैं।
अरिङगलको गोला हो दशैं।
मुछिएको टीका हो दशैं।
बादशाह र मेमको
हैकमवाद हो दशैं।
उफरयाँई र लडाई जस्तै
भिरको चिन्डो उँधो न उँभो हो दशैं।
पलैंटी कसाई हो दशैं।
लिङ्गे पिङ्गको मच्चाई र
टुप्पो छुनुको जस्तो
धोको हो दशैं।
रक्सी र खसीको
साँढे जुझाई हो दशैं।
फेराई हो दशैं।
म पिउँदिन भन्छु
व्याकूल भएर आउँछ
बाढी झैँ उर्लेर आउँछ
मनका पीरहरू !
हुस्की रमका प्यालासितै।
कसाईले नाङ्गै बनाएका
जीवनका चोक्टाहरू देख्दैछु
विसङ्गतिको खुकुरीले हरपल काट्टिरहेको।
त्यसैले म...पिउँदिन भन्छु..तर
अनि म मरे भन्न नपाएका
ऐठन पार्छ घाँटीमा हरएक रात।
त्यसैले म पिउँदिन भन्छु तर..
मृत्यु बोकी आएका आइलाले
झारेका पहाडको आँसु
समतल बसेर म
हरएक साँझ पिउँदैछु घुट्घुट्।
त्यसैले म पिउँदिन भन्छु
मत्थु लोग्नेले स्वासनीलाई फकाउन खोजे जस्तो
प्रेमीले प्रेमीकालाई छक्याउन खोजे जस्तो।
तर म पिउँछु नै हरएक साँझ
हरएक रात !
विसङ्गति जीवनको !!
ब्यागको थैली थैलीमा
जोगीले झोला पिठ्यूँमा बोके झैं
कतै मान्छेको लास बोकेर हिँडेको जस्तो
कसैले चिहाउँछ कि भन्ने त्रास बाकी
प्रकृतिको अमूल्य देन
प्रवित्रताले वञ्चित बाघचुलीमा
उ गाउँदैछ, नाँच्दैछ फेरि छात्दैछ
त्यहाँ उध्देश्य जानुको
पवित्रको अर्थ र फेरि
सौन्दर्यताको ज्ञानै नहुँदो हो
उ बस् फेरि गाउने कोसिसमा छ
तर निस्तब्धता !
Posted by Dipen Tamang at Monday, September 06, 2010 No comments:
तिमी ( 20 गस्त 2009 को भाषा मान्यता दिवसमा पठन गरि...
भाषा अनि हामी ( 20 अगस्त 2010 - भाषा मान्यता दिव...
एम एम एसमा गान्धी
मेरो गाउँलाई सोध